VaDonald Trump vachipesana naBarack Obama pamabasa nekukura kwemabasa pasi pevamwe vatungamiriri - teles
VaDonald Trump vachipesana naBarack Obama pamabasa nekukura kwemabasa pasi pevamwe vatungamiriri
CLEVELAND, Ohio - VaDonald Trump vanogona kutaura nemazvo kuti nyika yakawedzera mabasa anoda kusvika miriyoni 6,6 kubva payakauya pachigaro. Asi vanopikisa vake vanogona kungotaura zviri nyore kuti kukura kwegore rega hazvisi pane zvakaitika panguva yekupedzisira yaBarack Obama.
Urwu ndirwo rudzi rwekushandisa iyo US Bureau yeVashandi Statistics 'yemwedzi nemwedzi mishumo seyenhumbi yekuita hay hay
Panowanzove nenzvimbo yakaringana yevazhinji vanokwanisa vezvematongerwo enyika kuti vashande zvakanakira ivo - kunyangwe kuwanda kwemabasa akakwana hakuite nemubhadharo, uye hakuzi mutsauko pakati pebasa renguva yakazara nebasa reimwe-nguva (munhu mumwe anoshanda maviri mabasa kuverenga kaviri mune aya manhamba).
Asi sezvo vezvematongerwo enyika vachashandisa nhamba idzi, zvakakodzera kuti dzokera kune dzaimbove purezidhendi iye zvino kuti makore matatu akazara ari data ari pamabhuku aTrump.
Panguva iyo nyika yakawana mabasa mazana matanhatu emazana matanhatu emazana matanhatu (,6,6%) mumakore matatu ekutanga pasi paTrump, yakawana mamirioni mazana matanhatu nemabasa akasimba (4,5%) mu makore matatu apfuura pasi paVaObama.
Pagore, huwandu wemabasa wakawedzera ne2,2%, 1,8% uye 1,72% mumakore matatu apfuura aOb Obama - nekukura kunodzikira gore rega rega - uye ne1,4%, 1,67% uye 1,37% mumakore matatu ekutanga pasi peTrump.
Iyo girafu pazasi inoratidza kuti maitiro anoita sei kubvira 2007-2009 kuderera.
United States yakagadzira anopfuura mamirioni maviri emabasa gore rapfuura, kuwanikwa kwe2%. Heano manhamba egore kubva pakuderera, maererano neUnited States Bureau yeVashandi Statistics.Mupfumi Exner, chiro.com
Hupfumi hweU.S. hwakagadzira mabasa zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu neshanu pamusoro pemakore matatu ekutonga kwaTrump, zvichibva mukufungidzira kwekutanga kwaNdira.
Kana danho rekukura kwebasa muTrump makore matatu ekutanga rikaenderera, achavhara makore mana muna Ndira aine mari yakakwana ye8745333 mabasa (kumusoro 6% kubva achitora chinzvimbo) - anenge ari pakati pehudyu yevatungamiriri vechangobva kuitika.
Pakati peavo vanogadzirisa zvirinani: Chikamu chekutanga chaBill Clinton (anosvika 11,6 miriyoni emabasa, kana 10,5%), nguva yechipiri yaClinton (anosvika 11,3 miriyoni emabasa, kana 9,3%), Ronald Regan kechipiri kota (kumusoro kwemamirioni 10,8 emabasa, kana 11,2%), iyo yaObama munharaunda yechipiri (+ 10,4 miriyoni mabasa, kana 7,7, XNUMX%).
Pakati peavo vanodzikira: Gumi rekutanga, George W. Bush wekutanga (anosvika zviuru makumi matanhatu nemaviri pamabasa, kana 76%), yekutanga yaObama (inosvika miriyoni imwe nemabasa, kana kuti 000%), nguva yechipiri yaGeorge W. Bush (mabasa emamirioni 0,06, anokwira 1,2%) naGeorge HW Nguva yeBush (inosvika mamirioni 0,9 mabasa, kana 1,3% ).
Heano pfupiso nemutungamiri wega wega munguva yavo yemakore mana, vachishandisa fungidziro dzazvino dzinowanikwa kubva kuUnited States Bureau yeVashandi Statistics, iyo dzimwe nguva inodzokera kumashure kunogadzirisa fungidziro dzekare.
1977-81 Carter 91 033 000 10 343 000 12,82%
1981-85 Reagan 96 372 000 5 339 000 5,86%
1985-89 Reagan 107 161 000 10 789 000 11,20%
1989-93 HW Bush 109 794 000 2 633 000 2,46%
1993-97 Clinton 121,363,000 11 569 000 10,54%
1997-01 Clinton 132 698 000 11 335 000 9,34%
2001-05 W. Bush 132 774 000 76 000 0,06%
2005-09 W. Bush 134 055 000 1 281 000 0,96%
2009-13 Obama 135 263 000 1 208 000 0,90%
2013-17 Obama 145 627 000 10 364 000 7,66%
x-2017-20 twa 152 186 000 6 559 000 4,50%
x-2017-21 akadzitira 154,372,333 8 745 333 6,01%
x-Cherekedza: Huwandu hwaTrump we 2017-2020 ndeye makore matatu chete, panzvimbo pemana kune mumwe nemumwe mutungamiriri mune tafura. Kufungidzira kwegore ra2017- 21 kunoenderana nekuwedzera muvhareji wekuwana mumabasa kubva muna 2017-20 kusvika pagore rekupedzisira kweye makore mana.
Democratic kana Republican
Kudzokera kumashure makore makumi matatu nemasere kunobvumira muenzanisi umo iyo White House yakamirawo - makore gumi nemaviri maRepublican uye makore gumi nematanhatu eDemocrat. Inotanga neyakaitika gore raRonald Reagan riri muhofisi - Ndira 32 kusvika Ndira 16.
Mumakore makumi matatu nemana, mabasa 32 miriyoni akawedzerwa apo maDemocrat aive muWhite House (Bill Clinton, Barack Obama), uye 34,5 miriyoni panguva yemutungamiri weRepublican (Reagan, George HWBush, George W. Bush, Trump).
Pakati pedzimwe nguva kubva iyo iyo White House yakakamurwa zvakaenzana pakati pemapato maviri:
Makore makumi maviri nemaviri apfuura kubva muna22-1998 (Clinton, George W. Bush, Obama, Trump): mabasa emamirioni 1999 akagadzirwa pasi pevaDemocrats; 19,5 miriyoni sub Republicans.
Makore gumi nematanhatu apfuura kubva muna 16-2004 (George W. Bush, Obama, Trump): mabasa gumi nemana nemazana matanhatu akawedzerwa pasi pevaDemocrats; 05 miriyoni sub Republican.
Makore matanhatu apfuura kubva 2014-2015: mabasa ane mamirioni masere pasi paDemocrat Obama; Mamirioni 8,1 pasi peRepublican Trump.
Mupfumi wekunze, dhata yekuongorora dhezheni yechaedza.com, inonyora nezve nhamba pane dzakasiyana siyana. Tevedza pane Twitter @RichExner. Ona dzimwe nyaya dzine chekuita nedatha cleveland.com/datacentral.
Verenga nyaya dzapfuura
Dow Jones kumusoro 49% muDonald Trump yekutanga makore matatu; zvinoita sei uchienzaniswa neobama, chitsamba, Clinton, reagan, carter
Pfungwa gumi dzekurangarira nezvesarudzo dzemutungamiri muOhio
Vavhoti yeNew Hampshire vanogona kutiudza kuti ndevapi vemutungamiri wenyika vangaita zvakanaka muOhio?
Chii Chingaitwe neIowa Caucuses Chingatiudza nezveOhio? Maitiro eUnited States akafanana, Akasiyana
Kunyangwe muDemocratic nhare yeCuyahoga County, 17 meya ndevaRepublican
Ongororo: Donald Trump ane imwe nzvimbo yekubata kuOhio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin
MaDemocrat muWesterville, Ohio yakasarudza nzvimbo yepurezidhendi yemusangano inoitisa bhuruu
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cleveland.com/datacentral/2020/02/donald-trump-vs-barack-obama-on-jobs-and-jobs-growth-under-other-presidents.html
TELES RELAY 21751 Posts 0 mashoko
BRVM uye DC / BR vanosangana nevanotengesa uye vangangoburitsa: Senegal nhanho